fanontaniana AFG Pilatus PC 12
1 taona 4 volana lasa izay #1038 by sruble
1 taona 4 volana lasa izay - 1 taona 4 volana lasa izay #1039 by DRCW
Manana ny fanontana boaty ve ianao FSX? Or Dampf? simivation.com dia manana an'io modely io ary nampiditra izany aho FSX Tsy misy olana, Ity no iray amin'ireo simia amin'ny flyaway
Indraindray ireny rindranasa ireny dia manampy ampirimina fanampiny izay hitarika ny FSX Ordinatera fiaramanidina tsy mamaky ny rakitra marina. Mba hisorohana an'io fanamarinana io dia tsy misy afa-tsy ordinatera iray ihany no misy ny anaran'ilay fiaramanidina. Raha vao manokatra ny ordinatera ianao, dia tokony hampiseho mivantana, ny modely, ny tontonana, ny CFG sns ... Raha toa ka tsy maintsy manokatra ordinatera roa ianao mba hahatongavana amin'io fampahalalana io, FSX tsy hamaky ilay rakitra. Manantenà izany manazava izany ho anao.
Raha vao maka ilay rakitra ianao, fa tsy mametraka izany ao amin'ny FSX Fandefasana ordinateran-tsarimihetsika. Atsofohy amin'ny biraonao. Ireto ny karazan-drakitra telo:
Last edit: 1 taona 4 volana lasa izay DRCW. Antony: Procedure amin'ny famoahana ny rakitra
1 taona 4 volana lasa izay #1040 by sruble
Misaotra anao, manana Steam Edition aho. Nanandrana fiantsenana roa, & simviation aho. tsy afaka ny hahazo ny iray hiasa. Hanandrana ny torohevitrao aho. maniry ahy vintana.
1 taona 4 volana lasa izay #1041 by sruble
1 taona 4 volana lasa izay #1042 by DRCW